विदेशमा बस्नेले बुद्धका लागि यति काम किन नगर्ने ? | खबर सम्प्रेषण
बुद्धको नाममा हरेक वर्षमा एकपटक शान्ति र अहिंसाको कुरा हुन्छ । बुद्धको विचार र योगदानको चर्चा हुन्छ । औपचारिक तामझाम र चहलपहलमै बुद्धजयन्तीको कर्म समाप्त हुन्छ । यसवर्ष पनि यस्तै कर्मकाण्डी काम सहित बुद्धजयन्ती मनाईयो । तर दुःखको कुरा जुन गौतम बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मिएको भनेर गर्व गरिरहेका छौं त्यसको स्वामित्व भने चलाखीपूर्ण ढंगले हाम्रै छिमेकी भारतले लिन खोज्दैछ । भारत र गौतम बुद्धबिचको साइनो भनेको उनले भारतको गयामा तपस्या गरेर बुद्धत्व पाएका हुन् । तर यी ठूल्दाई यतिखेर साम, दाम, दण्ड, भेद लगाएर बुद्ध भारतमै जन्मिएका हुन भनेर भ्रम छर्ने अभियानमा छ । मिडियामा भँगेरे टाउके अक्षरमा बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन भनेर आइरहेको, थुप्रै देशका पाठ्यपुस्तकमा बुद्ध भारतमा जन्मिएको भनेर उल्लेख भएको छ । त्यतिमा त्र हैन, नेपालको कपिलबस्तुमा रहेको लुम्बिनीजस्तै हुबहु संयन्त्र बनाइरहेको भारतले । त्यसैले बुद्ध जयन्ती मनाइरहँदा बुद्ध भारतमा हैन नेपालमा जन्मिएका हुन भनेर स्थापित गर्ने संकल्पमा लाग्नु नेपालीहरुको पहिलो कर्तब्य भएको छ ।
गौतम बुद्ध नेपाली माटोमा जन्मेका यहाँका ऐतिहासिक विभूति हुन् भत्रे कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएपनि छिमेकी भारतले यसलाई भ्रममा पार्ने कुचेष्टा गरिरहेको छ । संसारका धेरै मान्छेले मात्रे गौतम बुद्धलाई उसले आफ्नो बनाउने दुस्साहस गरेको छ । यसलाई चिर्न स्वदेशमा रहेकाको भन्दा बिदेशमा बस्ने नेपालीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संसारका हरेक कुनामा बस्ने नेपालीले बुद्ध भारतमा होईन, नेपालमा जन्मेका हुन् भत्रे कटु यथार्थलाई स्थापित गर्न सक्छन् । यसको लागि केही गर्नै पर्दैन आआफ्ना ठाउँबाट यसबारे सानो प्रचारप्रसार नै पर्याप्त हुन्छ । बेलायतमा बस्ने रामकुमार श्रेष्ठको अगुवाईमा यस्तो अभियान शुरु भैसकेको छ जसमा बिश्वभरका हजारौं अभियन्ता जोडिएका छन् । उहाँलगायतको समूहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई उपयोग गरी १ डिसेम्बर २००९ लाई कपिलवस्तु दिवसको रुपमा मनाउन थालेको छ । बुद्धका महत्वपूर्ण सन्देश र बिधिहरुलाई बिभित्र माध्यम मार्फत प्रचारप्रसार गर्नु अभियानको मुख्य उदेश्य हो । अभियानले बुद्धको जन्मस्थलबारेको भ्रम चिर्दै बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भत्रे कटु यथार्थलाई बिश्वसामु चिनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । उसले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा मलजल गर्ने प्रयास पनि थालेको छ ।
गौतम बुद्धले प्रतिपादन गरेको धर्म र उपदेशहरु नेपालका साथै भारत, चीन, श्रीलंका, बर्मा, थाईल्याण्ड, भुटान, जापान, मंगोलिया, कोरिया लगायत बिश्वका बिभित्र देशमा बुद्ध धर्मका रुपमा विस्तार भएका छन् । यी हरेक देशमा बस्ने नेपालीले बुद्ध भारतमा होईन, नेपालमै जन्मेका हुन् भनेर किन नभत्रे ? यस्तै अभियान किन नथाल्ने ? हरेक दिन बुद्धजयन्तीको दिनमा मात्रै गाईने शान्ति र अहिंसाको रागले मात्रै कुनै लछारपाटो लगाउँदैन । हरेक दिनजसो गरिने सानो प्रचार अभियानले विश्वसामु गौतमबुद्धबारेको यथार्थ कुरा छर्लङ्ग पार्न सहयोग पुग्छ । भारतले उत्तरप्रदेश अलिगढवा राज्यको सिद्धार्थनगर पीपरहवा क्षेत्रलाई कपिलवस्तु नामाकरण गरेर बुद्ध भारतमै जन्मेका हुन् भत्रे भ्रम छर्न खोजिरहेको छ । उसले बुद्धको वास्तविक मावली गाउँ देवदह, जन्मस्थान लुम्बिनी र दरबार तिलौराकोट बीचको दूरी पनि नेपालमा जस्तै बनाउने काम गरेको छ । यसको लागि उसले त्यहाँ सबै नक्कली भग्नावशेष बनाएको छ । लुम्बिनी र आसपास क्षेत्रका ढुंगा, माटो र स्तम्भलाई दुरुस्तै कपी गरिएको छ । विश्वका जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउन भारतले आप्mना पाठ्यपुस्तकमा नै बुद्ध भारतमा जन्मेको हो भनेर लेख्ने काम पनि गरेको छ ।
भारतले यति धेरै हर्कत गरिसक्दा पनि नेपाली पक्ष अझै मौन छ । अब सरकार र नेताहरुको भर परेर होईन, राष्ट्रियता जोगाउन सबै नेपाली त्यसमा पनि बिदेशमा रहेका नेपाली कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ । किनकी नेपाललाई सन्सारमा चिनाउने एउटा बलियो र महत्वपूर्ण आधार शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्ध हुन जसका रक्षा गर्नु बिश्वभर छरिएर रहेका नेपाल अबैतनिक दूत अर्थात हरेक नागरिकको कर्तब्य हो । हामी यहा“ बसेर बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भत्रे विषयलाई संसारले बुझेकै त छौं भनेर ढुक्क छौं । तर लुम्बिनीमाथि भारतले गरेको अपमानले सारा बिश्व नै उसको भ्रममा पर्न सक्ने खतरा छ । उसको हेपाहा प्रवृत्तिलाई चिर्न सकिएन भने भोलि गौतम बुद्धलाई सम्झेर लुम्बिनी आउने पर्यटक भारत पुग्न बेर छैन । सबै नेपालीसंगै सन्सारभर रहेका बुद्धका अनुयायीहरुलाई भारतले पार्न खोजेको भ्रम चिर्न अब होस्टेमा हैंसे गर्नैपर्छ । कपिलबस्तु दिवसजस्तै अन्य थुप्रै अभियान चलाउन सकिन्छ जसले गर्दा हरेक देशमा रहेका नेपालीहरुले प्रचार गर्न सकुन कि बुद्ध नेपालमा जन्मिउका हुन्, ती हाम्रा सम्पित्त हुन् । भारतले भन्दैमा बुद्ध कदापी त्यहाँ जन्मेको मात्र सकिंदैन । नक्कली भग्नावशेष बनाएर उत्तरप्रदेशको सिद्धार्थनगर क्षेत्र लुम्बिनी बत्र सक्दैन । बुद्ध कसैका व्यक्तिगत सम्पित्त होईनन्, तर नेपालका विभूति हुन् । उनी नेपाली भूमीमा जन्मेका हुन् । अहिलेका नेताहरुमा जस्तो बुद्धसँग भारतको कुनै साईनो सम्बन्ध छैन । मात्र अरु देशका जस्तै भारतका अनुयायीहरुले पनि बुद्धलाई मात्र सक्छन् । तर आप्mनो पेवा बनाउन कदापी सक्दैनन् । यो वास्तविक सत्य विश्वसामु फैलाउन सन्सारभर रहेका नेपालीले आजैदेखि सानो पहल किन नथाल्ने ?